My iPhone gaghị agbanye n'oge gara aga Apple Logo! Nke a bụ ndozi ahụ. - Iphone
Nwata nwanyi nkịta aha na ihe ọ pụtara
iphone enweghị ike nyochaa ozi njirimara ihe nkesa
atụmatụ ezinụlọ kacha mma 2016
My iPhone agaghị agbanye n'oge gara aga Apple Logo! Nke a bụ ndozi.
Mgbe ị na-agbanye iPhone gị, ị ghọtara na ọ na-etinye oge dị iche iche na-enweghị atụ na-agbanye. Ihuenyo iPhone gị na-egosi naanị akara Apple na ihe ọ bụla ọzọ na ị maghị ihe ị ga-eme. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe ị ga - eme mgbe iPhone gị agaghị agbanye na akara ngosi Apple .
Kedu ihe kpatara na iPhone m agaghị agbanye na Apple Logo gara aga?
Mgbe ị gbanye iPhone gị, ọ na-ebute ngwanrọ ahụ ma nyochaa ngwaike niile iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Apple logo gosipụtara na iPhone gị ka ihe a niile na-eme. Ọ bụrụ na ihe agahie ụzọ, iPhone gị agaghị agbanye na akara ngosi Apple.
N'ụzọ dị mwute, nke a na-abụkarị ihe ịrịba ama nke ezigbo nsogbu. Otú ọ dị, a ka nwere ohere ọ nwere ike idozi.
Ọ bụrụ na ị gbanwere akụkụ na iPhone gị ma nwee nsogbu a ugbu a, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịnwa iweghachi akụkụ ahụ. Ọ bụrụ na ịgbanyebeghị akụkụ nke iPhone gị, soro usoro ndị dị n'okpuru!
Mgbe ụfọdụ ese gị iPhone ka Malitegharịa ekwentị bụ ihe niile ị chọrọ ime iji dozie nsogbu ahụ. Ebe ọ bụ na iPhone gị agaghị agbanye na mbụ Apple logo, ị ga-eme nrụpụta siri ike. Hardzọ isi tọgharịa iPhone dabere na ụdị nke ị nwere, yabụ anyị emebila usoro maka ngwaọrụ ọ bụla.
iPhone 6s, iPhone SE, & Na mbụ
N'otu oge pịa ma jide Igodo ụlọ na bọtịnụ ike (Ihi ụra / Tetanụ bọtịnụ) ruo mgbe ihuenyo na-agba oji na Apple logo na-egosi ọzọ.
iPhone 7 & iPhone 7 gbakwunyere
Pịa ma jide olu ala button na bọtịnụ ike n'otu oge ahụ. Nọgide na-ejide bọtịnụ abụọ ahụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ.
Malite site na ịpị na ịtọhapụ ihe Mpịakọta Ejiri bọtịnụ . Wee, pịa ma hapụ ihe ahụ Mpịakọta Down button . N'ikpeazụ, jigide bọtịnụ n'akụkụ . Nọgide na-ejide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara. Cheta ịpị igodo olu na mbido, ma ọ bụ ihe ọzọ ị nwere ike izipu ozi na kọntaktị SOS gị na mberede!
Tinye iPhone Gị na DFU Ọnọdụ
.B. Ngwaọrụ femụwe Update (DFU) weghachite oge ma weghachite ngwanrọ na femụwe gị iPhone. Nke a na ụdị weghachi bụkwa ikpeazụ nzọụkwụ i nwere ike ime ka kpamkpam chịrị ụdị ọ bụla nke iPhone software nsogbu.
N'okpuru ebe a, anyị akwatuola usoro DFU weghachite maka ụdị dị iche iche nke iPhone.
DFU Weghachi Older iPhones
Akpa, jikọọ gị iPhone na kọmputa na iTunes iji gị odori USB. Mgbe ahụ, pịa ma jide bọtịnụ ike na bọtịnụ Home n'otu oge. Mgbe ihe dị ka sekọnd asatọ, hapụ nke bọtịnụ ike ka ị na-aga n'ihu pịa bọtịnụ Home. Hapụ Home button mgbe gị iPhone na-egosi na iTunes.
Malite usoro ahụ site na mmalite ma ọ bụrụ na iPhone apụtaghị na iTunes.
Ọ bụrụ na iPhone gị egosighi na iTunes, bido site na mbido.
DFU weghachi iPhone 8, iPhone X, iPhone XS na iPhone XR
Jiri a Lightning USB jikọọ gị iPhone na kọmputa na iTunes. Na-esote, pịa ma hapụ bọtịnụ Volume Up, wee pịa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ.
kedu ebe m ga -esi alụ obodo site na nkịtị
Mgbe ihuenyo gbanwere oji, pịa ma jide bọtịnụ olu ala mgbe ị na-aga n'ihu na-ejide bọtịnụ n'akụkụ. Chere ihe dị ka sekọnd ise, wee hapụ bọtịnụ n'akụkụ ka ị na-aga n'ihu ijide bọtịnụ olu. Nọgide na-ejide ruo mgbe iPhone gị pụtara na iTunes.
Anyị maara na nke a dị ọtụtụ, yabụ lelee vidiyo anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị jee gị ụkwụ na usoro ahụ!
Idozi Nsogbu Akụrụngwa Ga-enwe
Ọ bụrụ na iPhone gị ka ga-agbanye na gara aga akara Apple, nsogbu ngwaike na-akpata nsogbu ahụ. Nsogbu a kpọmkwem na - eme mgbe arụchara ọrụ mmezi.
Ọ bụrụ na ị gara n’ụlọ ọrụ ndozi nke atọ, anyị na-akwado ịlaghachi ebe ahụ iji hụ ma ha ga-edozi nsogbu ahụ. Ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ ndị kpatara ya, enwere ohere na ha ga-edozi iPhone gị, na-akwụghị ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị gbalịrị iji dochie ihe ọ bụla n'onwe gị, ị ga-achọ iweghachi iPhone ahụ n'ọnọdụ mbụ ya na-ewere ya na Storelọ Ahịa Apple . Apple agaghị emetụ iPhone gị aka ma ọ bụ nye gị ọnụ ahịa mgbanwe na-enweghị ikike ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ị dochie akụkụ nke iPhone gị na akụkụ ndị na-abụghị Apple.
Pulse bụ oké ọzọ idozi nhọrọ i nwere ike ịgakwuru. Puls bụ ụlọ ọrụ na-achọ nrụzi na-eziga onye ọrụ ruru eru ozugbo n'ọnụ ụzọ gị. Ha rụkwaa iPhones na ebe ahụ ma nye ha ikike ndụ ha niile.
Lọ ahịa maka ekwentị ekwentị ọhụrụ
Kama ịkwụ ụgwọ maka nrụzi dị oke ọnụ, ị nwere ike ịchọ iji ego ahụ zụta ekwentị ọhụrụ. Lelee ekwentị tụnyere ngwá ọrụ na UpPhone.com iji tụnyere ekwentị ọ bụla site na igwe ikuku ọ bụla! Ọtụtụ oge, ndị na-ebu gị ga-enye gị nnukwu azụmaahịa na ekwentị ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị kpebie ịgbanwe.
Otu Apple A Day
Anyị maara na ọ bụ nrụgide mgbe iPhone gị agaghị agbanye na mbụ akara Apple. Ugbu a ị maara kpọmkwem otu esi edozi nsogbu a ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ọzọ. Daalụ maka ịgụ. na ka anyị mara otú ị ofu gị iPhone na-aza ajụjụ n'okpuru!